Umkhiqizi nomhlinzeki we-Wholesale Self Loading Container Trailer | I-CCMIE
I-Trailer Yokulayisha Isitsha Sokulayisha
Ubukhulu. ukuphakamisa umthamo: 37000kg
Inqwaba yomgwaqo: 14500kg
Inqwaba yabantu abaphakamisa ohlangothini: 7250kg
Isisindo esikhulu ngokuphelele: 40000kg
Uhlaka ubukhulu semi-trailer (L × W × H): 14100 × 2500 × 4000mm
Uhlaka ubukhulu ohlangothini ophakamisa (L × W × H): 1020 × 2500 × 2490mm
Imodeli Yenjini: Kubota 2403-M-DI-E3B-CSL-1 (Inketho, uma ubuyekeza imodeli, sizokwazisa ngenkathi u-oda)
I-Self Loading Container Trailer ilayisha futhi ithulule iziqukathi ngokusebenzisa ama-cranes amabili anamandla abekwe ekugcineni ngakunye kwe-trailer engama-40. I-Self Loading Container Trailer yakhelwe ukuphakamisa iziqukathi phansi, kusuka kwezinye izinqola ezisuka ezimotweni ezisuka ezitokisini ezigingqikayo, kusuka ezinqoleni zesitimela kusuka ezinqolobaneni zamachweba kuya e-anther trailer, komunye umhlaba, kuya esitokisini se-anther. I-Self Loading Container Trailer S ingahlinzeka ngokulethwa kweziqukathi ezingama-20ft no-40ft. I-trailer ye-Self Loading Container Trailer iqinisiwe yakhelwe, enomthwalo wayo ongamathani angama-80.
Inkampani yethu igcizelela ukuthi "ikhwalithi ephezulu, ukulethwa ngesikhathi esifanele, intengo ekhethwayo", futhi manje sesisungule ubudlelwano besikhathi eside bokusebenzisana namakhasimende aseChina namakhasimende aphesheya kwezilwandle, futhi sinikezela abakhiqizi bekheshi abalayisha ohlangothini lwe-Self Loading Container Trailer ukuze bathole ukunconywa amakhasimende amadala. I-Self Loading Container Trailer, Inkampani yethu ibilokhu izinikele "kumakhasimende kuqala" futhi izibophezele ekusizeni abathengi bandise izinhlangano zabo futhi babavumele babe ngabaphathi abakhulu!
Ifektri iphakela ama-trailer okulayisha ohlangothini eChina nezinqola zokulayisha ohlangothini. Simagange ukusebenzisana nezinkampani zakwamanye amazwe ezigxila kwikhwalithi, ukunikezwa okuzinzile, amandla aqinile nezinsizakalo ezinhle. Singahlinzeka ngentengo yokuncintisana kakhulu nekhwalithi ephezulu ngoba sesivele sinolwazi oluningi. Wamukelekile ukuvakashela inkampani yethu nganoma yisiphi isikhathi.
Ubunikazi obunelungelo lobunikazi bokuphakamisa idivayisi yokukhiya ukulayishwa nokulayishwa kwesitsha
Indlela yokuphakamisa i-chain twist yokukhiya ukulayishwa nokulayishwa kwempahla, ilokhi esonta ngokuzungezile izungeziswa futhi ikhiyelwe ekhoneni lesitsha ngesikhathi sokupakisha, ngeke iwe, futhi iqinisekise ukuphepha ngesikhathi sokusebenza; ngesikhathi sokuhamba, ilokhi esontekile isengavalwa ngokuzenzakalela ngedivayisi enomkhawulo, Ukuqedwa kokuphindaphindeka kweqoqo lezokuthutha nokulayishwa kweketanga kuyasuswa, nokuphepha ngesikhathi sokushayela nakho kuthuthuke kakhulu. Ngemuva kokuthi umsebenzi usuphothuliwe, iketanga lokuphakamisa lingabonakala enkambisweni yokuthola kabusha i-crane ngokwandisa umugqa wokuhamba kwephoyinti lokuphakama nendawo yokuqoqwa kwamaketanga. Isitoreji esizenzakalelayo sithuthukisa kakhulu ukunethezeka kokusebenza nokuphepha kwayo yonke imoto.
Langaphambilini Isitsha Phakamisa
Olandelayo: Side Phakamisa Crane
I-Side Loader Trailer
I-ISO 20ft 40ft Container Reachstacker
I-Side Lifter Trailer
Truck Onyuswe Isitsha Side Loader ophakamisa
Side Phakamisa Crane